Visas mankany Sri Lanka ~ Journey-Assist- Mpizaha tany. Miasa. vidin'ny
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Visas mankany Sri Lanka
Visas mankany Sri Lanka. Karazana karazana Visas
Ny karazana visa ho any Sri Lanka
Ny fitsidihana an'i Sri Lanka dia mizara ho karazana 2 - fotoana maharitra sy fotoana fohy. Ireo fotoana fohy dia ahitana visa mpizaha tany, visa iray varotra ary visa visa. Ireo karazana visa rehetra ireo dia azo avoaka amin'ny Internet, ao amin'ny masoivoho Sri Lanka na rehefa tonga eto amin'ity firenena ity, izay eo amin'ny sisin-tany, alohan'ny nandalovany ny fifehezana pasipaoro.
Visa visa mpizaha tany
Visa nijanona ela (mponina visa)
Visa ho an'ny olom-pirenena taloha tao Sri Lanka
Visa ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana ao Sri Lanka
Visa visa fisotroan-dronono
Visa ho an'ny mpanao gazety
Tany Sri Lanka tamin'ny 01.08.2019/01.03.2020/30 ary hatramin'ny 90/XNUMX/XNUMX, nisy visa XNUMX andro ho an'ny mpizahatany nampidirina ho an'ny olom-pirenena Rosiana sy Okrainiana. Ny visa iray dia azo avoaka amin'ny alàlan'ny Internet tsy mihoatra ny XNUMX andro alohan'ny andro hidirana, na amin'ny seranam-piaramanidina any Sri Lanka raha vao tonga.
Rehefa mangataka amin'ny Internet ianao, ny visa toy izany dia mamela anao hiditra any Sri Lanka indroa, ary rehefa misoratra amin'ny seranam-piaramanidina aorian'ny fahatongavana, indray mandeha.
Any amin'ny seranam-piaramanidina
Raha mangataka visa amin'ny mpizahatany any amin'ny seranam-piaramanidina ianao, dia hajia mandritra ny 30 andro ny hajia visa iray. Ho an'ny fisoratana anarana dia mila mandoa $ 40 ianao (manomboka ny 1 aogositra, ho an'ny Rosiana sy olompirenena any Okraina, maimaim-poana ity fomba ity). Afaka mandoa vola dolara na euros ianao.
Ny fandoavam-bola amin'ny ampahany amin'ny vola dolara ary amin'ny ampahany amin'ny euro dia tsy azo atao. Ny vola rehetra dia tsy maintsy andoavana amin'ny vola iray. Ny fandoavam-bola amin'ny banky dia azo atao ihany koa.
Azonao atao ny manitatra an'io visa io amin'ny talen'ny departemanta misahana ny fifindra-monina ao Colombo. Azo atao indroa izany: mandritra ny 2 sy 3 volana ka hatramin'ny 30 andro tany am-boalohany. Araka izany, 6 volana ny fitambaran'ny fotoana laniny amin'ny faritanin'i Sri Lankan momba an'io visa io.
Raha mamoaka visa an-tserasera ny visa mpizahatany dia 2-tapitra, ary 30 andro ny fotoana maha-manan-kery.
Ny vidin'ny fisoratana anarana dia ho $ 35 (ho an'ny olom-pirenena ao amin'ny Federasiona Rosiana sy Ukraine manomboka amin'ny 01.08.2019/XNUMX/XNUMX - maimaim-poana).
Mba hanaovana izany, araho ny rohy http://eta.gov.lk/etaslvisa/etaNavServ?payType=1, fenoy ny taratasy amin'ny teny anglisy.
Azo atao ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny karatra Visa, Mastercard ary American Express. Ny visa dia manan-kery mandritra ny 6 volana manomboka amin'ny fotoana nanoratana azy. Azo atao ny fanitarana any amin'ny biraon'ny sampana misahana ny fifindra-monina ao Colombo.
Ny fisoratana anarana alohan'ny fisoratana anarana an-tserasera dia midika fa tokony hanao kopia ny fanamafisana ny visa mpizahatany ianao mba hampisehoana izany any amin'ny seranam-piaramanidina raha ilaina izany.
Any amin'ny masoivoho akaiky indrindra ao Sri Lanka
Any amin'ny masoivoho Moskoa dia afaka mangataka visa 1 na fe-potoana na fe-potoana 2 ka hatramin'ny 90 andro. Mitaky $ 35 dolara io fomba fiasa io.
Raha momba ny fisoratana anarana ao amin'ny masoivoho Moskoa ny olom-pirenenan'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina miaraka amin'i Rosia izay manana faritany tsy misy iraka diplaomatika nekena ao Sri Lanka (Ukraine, Kazakhstan, Belarus), dia tsy maintsy miatrika amin'ny fotoana handefasana antontan-taratasy ianao.
Ankoatr'izay, ny olom-pirenena amin'ny repoblika sovietika taloha dia tsy maintsy manana visa visa hanamarina ny maha-ara-dalàna ny fijanonany ao amin'ny Federasiona Rosiana amin'ny fotoana fandefasana azy.
Business visa mankany Sri Lanka
Ny visa visa any Sri Lankan dia afaka mivoaka an-tserasera, eny amin'ny seranam-piaramanidina sy amin'ny masoivoho. Afaka manome ny zo hiditra ao Sri Lanka indray mandeha, indroa na imbetsaka imbetsaka.
Ny safidy voalohany voalohany dia mety ho an'ny olona mandray anjara amin'ny hetsika toy ny symposia, ny seminera, ny fiofanana mandritra ny fotoana fohy, ny hetsika ara-kolontsaina, ny fandraharahana.
Ny fahasamihafana eo amin'ny visa visa sy ny visa visa any Sri Lankan dia ny tsy nanome fahefana taloha ny hetsika hanao asa mahasoa any Sri Lanka.
araho ny rohy http://eta.gov.lk/etaslvisa/etaNavServ?payType=1, fenoy ny fangatahana anaty taratasy anglisy. Azo atao ny fandoavam-bola miaraka amin'ny karatra Visa, Mastercard ary American Express.
Azo atao ny fanitarana amin'ny biraon'ny departemanta mifindra monina ao Colombo.
Any amin'ny seranam-piaramanidina rehefa tonga
Any amin'ny seranam-piara-manidina: rehefa tonga, visa visa in-2 dia omena mandritra ny 30 andro. Mitentina $ 50 ny vidiny. Raha mivoaka ny visa visa rehefa tonga, dia afaka 2-fehezina izany.
Maro no azo alaina any amin'ny sampana fifindra-monina. Azonao atao ny manitatra ny visa voarainy ao amin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny biraon'ny departemanta misahana ny fifindra-monina ao Colombo.
Ny fanavaozana dia azo atao tsy mihoatra ny 7 andro alohan'ny fotoana maha-lany ny visa ara-barotra navoaka tao amin'ny seranam-piaramanidina. Ny fandoavam-bola ho an'ity fomba ity dia ahitana ny saram-pisaorana (faritanin'ny firenen'ny olom-pirenena), hetra ary sarany ho an'ny antontan-taratasy.
Any amin'ny masoivoho akaiky anao
Ao amin'ny masoivoho Moskoa ao Sri Lanka sy ao amin'ny sampana fifindra-monina ao Colombo dia azo atao ny mangataka visa 2 karazana misy alàlana 90 na andro: tokana sy maromaro.
Ny fisoratana anarana marobe miaraka amin'ny fe-potoana 30 andro dia mitentina $ 40, ny iray miaraka amin'ny fe-potoana maharitra hatramin'ny 90 andro dia $ 40 ihany koa.
Visa ity dia fidirana tokana ary manana vanimpotoana maharitra mandritra ny 8 ora ka hatramin'ny 7 andro. Azo amboarina amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny ETA. Malalaka ny famolavolana. Azo atao ny misoratra anarana eo amin'ny seranam-piaramanidina ary amin'ny alàlan'ny masoivoho Moskoa.
Ireo karazana visa fitaterana mankany Sri Lanka
Manomboka amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 2 andro.
Ilaina ny manana tapakila fiaramanidina miaraka amin'ny daty fialana tafiditra ao anatin'ny elanelam-potoana mifanaraka. Malalaka ny famolavolana. Azo atao izany rehefa tonga sy an-tserasera.
Tsy misy ny vidiny amin'ny paikady.
Ity visa ity dia tsy manome zahana handao ny faritra fitaterana fitaterana entana eny amin'ny seranam-piaramanidina.
Manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 andro.
Ny fisoratana anarana dia atao amin'ny seranam-piaramanidina, an-tserasera ary amin'ny masoivoho.
Ireo visa ireo dia manome ny zo hijanonana ao Sri Lanka mandritra ny fotoana maharitra. Misy karazany maro toy ny visa toy izany - mpianatra, asa, finoana, fisotroan-dronono, fampiasam-bola, diplaomatika.
Ny karazana visa maharitra rehetra dia misy fehezan-teny samihafa, fepetra fisoratana anarana sy fepetra fanavaozana. Ary na dia afaka mamoaka afa-tsy ivelan'i Sri Lanka aza ny visa toy izany, amin'ny ankapobeny, dia azo atao matetika ny mampihatra izany ho ara-dalàna efa nandritra ny fijanonanao eto amin'ity firenena ity miaraka amin'ny fanampian'ny mpanelanelana (mazava ho azy, amin'ny vola sasany).
Izany no hany karazana visa izay omen'ny vahiny ny zo hiasa any Sri Lanka.
Iza no afaka fangatahana visa visa any Sri Lanka:
Ireo matihanina mendrika dia ny serivisy ilaina amin'ny fanatanterahana ireo tetik'asa tafiditra ao amin'ny filankevitry ny fampiasam-bolan'ny Sri Lanka. Ny lisitr'izy ireo dia eken'ny governemanta Sri Lanka. Ny vanim-potoana maha-ara-dalàna ny visa ho an'ireo manam-pahaizana manokana dia 1 taona. Aorian'ity vanim-potoana ity dia azo atao ny fanitarana isan-taona. Ny mpanatanteraka orinasa dia afaka mangataka visa toy izany mandritra ny 2 taona.
Mpiasa amin'ny banky sy olona ao amin'ny fianakaviana amin'ireny mpiasa ireny. Fahamarinana - 1 taona. Azo atao koa ny manankery visa mandritra ny faharetan'ny fifanarahana. Aorian'io fotoana io dia azo atao ny fanitarana isan-taona.
Mpirotsaka an-tsitrapo, mpiasa tsy miankina amin'ny fikambanana. Fahamarinana - 1 taona. Azo atao ihany koa ny mihetsika mandritra ny vanim-potoana natolotry ny Minisiteran'ny Fiarovana Sri Lankan (izay manao fahazoan-dàlana amin'ny asa). Aorian'io fotoana io dia azo atao ny fanitarana visa.
Mpiasa izay mandray anjara amin'ny tetik'asa diplaomatika vahiny. Fahamarinana - 2 taona. Azo atao ihany koa ny hetsika ao anatin'ny fotoana natolotry ny minisiteran'ny raharaham-bahiny any Sri Lanka. Aorian'ny fetra farany dia azo atao ny fanitarana isan-taona.
Mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'izy ireo. Fahamarinana - 1 taona. Aorian'ny fanatanterahana dia azo atao ny fanitarana isan-taona.
Amin'ny ankapobeny, ny fahazoana visa ho any Sri Lanka dia asa somary sarotra. Ohatra, azo atao ny manao fisoratana anarana orinasa iray eto amin'ity firenena ity na dia visa visa mpizahatany aza, saingy na dia tsy manilika ny mety hamoaka aorian'izany aza ny fahazoan-dàlana ho an'ny talen'ny orinasa toy izany, raha ny marina dia tsy omena ny talen'ny orinasa vaovao ny visa visa.
Ny taona dia 1 taona aorian'ny fahavitany dia azo atao ny fanitarana isan-taona. Ny mpamatsy vola iray dia afaka mahazo visa toy izany mandritra ny 5 taona miaraka amin'ny vola mitentina 300 ka hatramin'ny 000 dolara, ary miaraka amin'ny tahiry mitentina 500 dolara - mandritra ny 000 taona.
Azo apetraka amin'ny mpikambana iray ao amin'ny fikambanana mpivavaka iray. 1 taona ilay teny, na izany aza, ny vanim-potoana fanamafisana dia mety ihany koa araky ny fandaharana voafaritra mazava.
Mivoaka am-pianaran'ireo mpianatry ny oniversite Sri Lankanina, andrim-pampianarana hafa (ny lisitr'izany no eken'ny governemantan'ity firenena ity) sy ireo ivontoeram-pampianarana ara-pivavahana. Ny vanim-potoana dia 1 taona. Mety ho fanitarana azo atao amin'ny faran'ity vanim-potoana ity. Raha te hahazo, dia mitentina 1 $ mandritra ny 500 taona no takiana.
Ho an'ny olom-pirenena taloha tao Sri Lanka
Ny maha-ara-dalàna ny visa toy izany dia 1 taona. Aorian'ity vanim-potoana ity dia azo atao ny fanitarana isan-taona.
Ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana ao Sri Lanka
Io visa io dia azo alai'ny vadin'ny olom-pirenen'i Sri Lanka na ny zanany, raha tsy manana zom-pirenen'ny Sri Lanka ny vady na zanaka. Ho an'ny mpivady, ny fahazoan-dàlana dia averina ihany aorian'ny 6 volana manomboka amin'ny datin'ny fanambadiana ary aorian'ny fijanonana maharitra ao Sri Lanka mandritra ny 3 volana farafahakeliny. Fahamarinana dia 2 taona, aorian'izay dia azo atao ny fanitarana. Raha hanavao, mila taratasy avy amin'ny vadinao mizaka ny zom-pirenen'i Sri Lanka ianao, manamafy ny fanekena amin'ny fonenan'ny mpivady vahiny amin'ity firenena ity. Ary koa, ny visa ho an'ny mpivady vahiny dia manome alalana hanao hetsika mahasoa miaraka amin'ny fameperana sasany.
Ny visa toy izany dia atolotra ho an'ny mpiasa masoivoho vahiny any Sri Lanka.
Fahamarinana - 2 taona, aorian'izay dia azo atao ny fanitarana.
Mba hahazoana visa toy izany, tsy maintsy miatrika ireto fepetra manaraka ireto ianao:
taona - 55 taona fara-fahakeliny;
fidiram-bola maharitra isam-bolana - farafahakeliny 1 dolara ho an'ny mpandray anjara lehibe ary farafahakeliny 500 dolara isaky ny mpandray anjara fanampiny amin'ny fandaharam-potoana ho an'ny olom-pirenena zokiolona;
ny fisian'ny fametrahana deposit ao amin'ny iray amin'ireo banky Sri Lankan (ny lisitry ny nankatoavin'ny governemantan'ity firenena ity) amin'ny vola 15 farafahakeliny.
Azo atao ny misoratra anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ity programa ity ao amin'ny Guest Service Center, izay misy ao Colombo, na any amin'ny masoivoho Sri Lankan, na any amin'ny birao foiben'ny departemanta misahana ny fifindra-monina (izay hita ao amin'ny Colombo ihany koa).
Ny mpanao gazety vahiny iray mba hiasa any Sri Lanka dia tsy maintsy mangataka alalana hiditra ao amin'ity firenena ity. Azo amboarina amin'ny fepetra sasany. Ny faharetany dia faritan'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny any Sri Lanka. Raha te hahazo visa toy izany, takiana ny fahazoan-dàlana avy amin'ny Minisiteran'ny fampahalalam-baovao Sri Lankan, izay avoaka miorina amin'ny soso-kevitry ny minisiteran'ny raharaham-bahiny. Ny fahazoana manaja sy manavao ny isam-batan'olona.
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 4